Burdcad badeeda Soomaalida oo malaayiin doolar oo ku siidaayey markab ganacsi – SBC
Burdcad badeeda Soomaalida oo malaayiin doolar oo ku siidaayey markab ganacsi
Posted by editor on Siteenbar 17, 2011 Comments
Kooxaha shufto badeeda Soomaalida ayaa la xaqiijiyey inay siidaayeen markab nooca xamuulka qaada oo laga leeyahay wadanka wadanka Vietnam balse ku gooshaya calanka wadanka Mongolia ayaa u gacan galey kooxdaasi bishii January ee sanadkan.
Markabkan oo xamuulka uu qaado uu gaarayo 22,835-tonne waxaa lagu magacaabaa MV Hoang Son iyadoo kooxaha shufto badeedu ay ka qabsadeen xeebaha wadanka Cumaan gaar ahaan Koonfurta magaalada Muscat 520 mile meel u jirta.
“Markabka laga leeyahay Vietnam ee ku socda calanka Mongolia ee lagu magacaabo MV Hoang Son Sun burcad badeedu waxay siidaayeen khamiistii ka dib ay qaateen lacag madaxfurasho ah oo la dhimay cadadkeeda mudo sideed bilood ka dib” ayaa lagu yiri warsaxaafadeed ka soo baxay hay’adda Ecoterra International ee arimaha baddaha qaabilsan.
Ecoterra International waxay kaloo sheegtey in markabku uu si nabad ah uga ambabaxay aagii lagu haystey, isla markaana uu ku sii jiido magaalada dekada ah ee Salalah, laakiin mulkiilaha markabku wuxuu sheegay in aanu wax war ah ka hayn xaalada ay ku sugan yihiin shaqaalaha markabkaasi oo 24 qof ka kooban.
Siideynta markabka waxaa sidoo kale xaqiijiyey nin ka mid ah shufto badeeda Soomaaliya.
“Ma garanayo inta ay dhan tahay lacagta madaxfurashadu, laakiin markabka waa la siidaayey” ayuu yiri ninkaasi ka mid ah burcad badeeda oo magaciisa ku soo koobay Cawiul oo wakaalada wararka ee Reuters la hadley isagoo sheegay in uu ku sugan yahay deegaanka Ceeldhanaane ee bariga Puntland.
Laakiin ilo wareed oo kale ayaa sheegaya in shufto badeeda la siiyey lacag gaaraysa 4.5 doolar (Afar milyan & bar).